Mateo 2 | Intanɛt So Bible| Wiase Foforɔ Nkyerɛaseɛ
KENKAN WƆ Afrikaans Albanian American Sign Language Amharic Arabic Argentinean Sign Language Armenian Australian Sign Language Austrian Sign Language Aymara Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Baoule Bassa (Cameroon) Batak (Karo) Batak (Toba) Bicol Bislama Brazilian Sign Language British Sign Language Bulgarian Cambodian Catalan Cebuano Chichewa Chilean Sign Language Chinese Cantonese (Simplified) Chinese Cantonese (Traditional) Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chinese Sign Language Chitonga Chitonga (Malawi) Chitumbuka Cibemba Colombian Sign Language Costa Rican Sign Language Croatian Cuban Sign Language Czech Dangme Danish Drehu Dutch Ecuadorian Sign Language Efik English Estonian Ewe Fijian Finnish French Ga Georgian German German Sign Language Greek Greek Sign Language Guarani Guatemalan Sign Language Gujarati Gun Haitian Creole Hebrew Hiligaynon Hindi Hiri Motu Honduras Sign Language Hungarian Hungarian Sign Language Icelandic Igbo Iloko Indonesian Indonesian Sign Language Irish Sign Language Isoko Israeli Sign Language Italian Italian Sign Language Japanese Japanese Sign Language Javanese Kabiye Kannada Kazakh Kenyan Sign Language Kikamba Kikaonde Kikongo Kikuyu Kiluba Kinyarwanda Kirghiz Kiribati Kirundi Kongo Korean Korean Sign Language Krio Kwanyama Laotian Latvian Lingala Lithuanian Luganda Lunda Luo Luvale Macedonian Malagasy Malay Malayalam Maltese Marathi Marshallese Maya Mexican Sign Language Moore Myanmar Ndebele Ndebele (Zimbabwe) Nepali Nias Nicaraguan Sign Language Nigerian Sign Language Norwegian Nyaneka Nzema Oromo Ossetian Otetela Panamanian Sign Language Pangasinan Papiamento (Curaçao) Paraguayan Sign Language Persian Polish Polish Sign Language Ponapean Portuguese Portuguese (Portugal) Portuguese Sign Language Punjabi Quebec Sign Language Quechua (Ancash) Quechua (Ayacucho) Quechua (Bolivia) Quechua (Cuzco) Romanian Russian Russian Sign Language Salvadoran Sign Language Samoan Sango Sateré-Mawé Sena Sepedi Serbian Serbian (Roman) Sesotho (Lesotho) Seychelles Creole Shona Silozi Sinhala Slovak Slovenian Solomon Islands Pidgin South African Sign Language Spanish Spanish Sign Language Sranantongo Swahili Swahili (Congo) Swati Swedish Swedish Sign Language Swiss German Sign Language Tagalog Tahitian Taiwanese Sign Language Tajiki Tamil Tatar Telugu Tetun Dili Thai Thai Sign Language Ticuna Tigrinya Tiv Tok Pisin Tongan Tshiluba Tshwa Tsonga Tswana Turkish Turkmen Tuvaluan Twi Tzotzil Ukrainian Umbundu Urdu Uruguayan Sign Language Uzbek Uzbek (Roman) Venda Venezuelan Sign Language Vietnamese Wallisian Waray-Waray Xavante Xhosa Yoruba Zambian Sign Language Zapotec (Isthmus) Zimbabwe Sign Language Zulu
2 Bere a wɔwoo Yesu wɔ Betlehem+ a ɛwɔ Yudea, Ɔhene Herode+ nna no mu no, hwɛ! nsoromma mu ahwɛfo+ fi apuei fam baa Yerusalem, 2 na wɔkae sɛ: “Ɛhe na nea wɔawo no sɛ Yudafo hene+ no wɔ? Yɛwɔ apuei fam na yehuu ne nsoromma,+ enti yɛaba sɛ yɛrebɛkotow no.” 3 Bere a Ɔhene Herode tee eyi no, ne bo tui, ɔne Yerusalemfo nyinaa, 4 na ɔfrɛfrɛɛ ɔman no mu asɔfo mpanyin ne akyerɛwfo nyinaa boaa ano bisaa wɔn faako a wɔbɛwo Kristo no. 5 Wɔka kyerɛɛ no sɛ: “Betlehem+ a ɛwɔ Yudea no; eyi ne nea wɔnam odiyifo no so akyerɛw, 6 ‘Na wo, Betlehem+ a wowɔ Yuda asase so, wonyɛ Yuda atitiriw mu akumaa; wo mu na otitiriw+ a ɔbɛyɛn+ me man Israel befi aba.’” 7 Ɛnna Herode frɛɛ nsoromma mu ahwɛfo no kokoam tɔɔ ne bo ase bisaa wɔn bere a nsoromma no puei, 8 na ɔsomaa wɔn kɔɔ Betlehem, na ɔka kyerɛɛ wɔn sɛ: “Monkɔ na montɔ mo bo ase nhwehwɛ abofra kumaa no, na sɛ muhu no a mommɛbɔ me amanneɛ, na me nso makɔ akɔkotow no.”+ 9 Bere a wotiee ɔhene no asɛm wiei no, wosiim kɔe, na hwɛ! nsoromma a wohui bere a na wɔwɔ apuei+ fam no dii wɔn anim kosii sɛ ekogyinaa faako a abofra kumaa no wɔ no atifi. 10 Bere a wohuu nsoromma no, wɔn ani gyei yiye. 11 Na bere a wɔkɔɔ fie no mu no, wohuu abofra kumaa no ne ne maame Maria, na wɔhwee fam kotow no. Afei nso, wobuebuee wɔn ademude so kyɛɛ no nneɛma, sika ne ɛhyɛ ne kurobow. 12 Nanso, na Onyankopɔn abɔ wɔn kɔkɔ+ wɔ ɔdae mu sɛ wɔnnsan nnkɔ Herode nkyɛn, enti wofii hɔ kɔfaa ɔkwan foforo so kɔɔ wɔn kurom. 13 Wofii hɔ kɔe no, hwɛ! Yehowa bɔfo+ yii ne ho adi kyerɛɛ Yosef wɔ ɔdae mu, na ɔkae sɛ: “Sɔre, fa abofra kumaa no ne ne maame guan kɔ Egypt, na tena hɔ kosi sɛ me ne wo bɛkasa; Herode rebɛhwehwɛ abofra kumaa no akum no.” 14 Enti ɔsɔre faa abofra kumaa no ne ne maame anadwo, na wofii hɔ kɔɔ Egypt, 15 na ɔtenaa hɔ kosii sɛ Herode wui, na ama nea Yehowa nam ne diyifo so kae no aba mu+ sɛ: “Egypt+ na mefrɛɛ me ba fii.” 16 Afei bere a Herode hui sɛ nsoromma mu ahwɛfo no adaadaa no no, ne bo fuwii kɛse, na ɔsoma ma wokokunkum mmarimaa a wɔwɔ Betlehem ne ne mpɔtam hɔ nyinaa, efi wɔn a wɔawo wɔn foforo so kosi wɔn a wɔadi mfe abien so, sɛnea bere a ohu fii nsoromma mu ahwɛfo+ no hɔ kyerɛ no. 17 Afei ɛmaa nea wɔnam odiyifo Yeremia so kae no baa mu sɛ: 18 “Wɔtee nne bi wɔ Rama,+ osu ne benabɔ pii; ɛyɛ Rahel+ na ɔresu ne mma na sɛ wɔkyekye ne werɛ a ontie, efisɛ wonni hɔ bio.” 19 Bere a Herode wui no, hwɛ! Yehowa bɔfo yii ne ho adi wɔ ɔdae+ mu kyerɛɛ Yosef wɔ Egypt 20 na ɔkae sɛ: “Sɔre, fa abofra kumaa no ne ne maame na si mu kɔ Israel asase so, na wɔn a na wɔrehwehwɛ abofra kumaa no kra no awuwu.” 21 Enti ɔsɔre faa abofra kumaa no ne ne maame kɔɔ Israel asase so. 22 Nanso bere a ɔtee sɛ Arkelao asi ne papa Herode ananmu redi Yudea so hene no, osuroe sɛ ɔbɛkɔ hɔ. Afei bere a Onyankopɔn bɔɔ no kɔkɔ wɔ ɔdae+ mu no, ofii hɔ kɔɔ Galilea+ mantam mu, 23 na ɔkɔtenaa kurow bi a wɔfrɛ no Nasaret+ mu, na ama nea wɔnam adiyifo no so kae no aba mu sɛ: “Wɔbɛfrɛ no Nasareni.”+